कुकुर बाँध्ने बेल्टले सुशान्तको घाँ’टी थि’चेर मा’रिएको खुलाशा – Dainik Sangalo
November 28, 2020 397
सुशान्त सिंह राजपुत आ’त्मह’त्या केस सिबिआइको हातमा परेदेखि नै केससँग जोडिएका कैयौं कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। उनका फ्यानहरूलाई अब अन्तिम रिजल्टको पर्खाइ छ। किन र कसरी सुशान्तमाथि यो सब आइपर्यो? दोषी आखिर को हो त? यत्ति जान्न सबै उत्सुक छन्।
यसैबीच सुशान्तका पूर्व असिस्टेन्ट अंकित आचार्यले सुशान्तको ह’त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँ’टी थि’चेर गरिएको दावा गरेका छन्। यो बयान वास्तवमै भ’यानक छ। अंकितका अनुसार, उनी हर समय चौबीसै घन्टा सुशान्तको साथमै हुन्थे। उनी सुशान्तलाई राम्रोसँग चिन्दछन्, बुझ्दछन्। त्यसैले उनी सुशान्तले आ’त्मह’त्या गर्न सक्ने कुरा मान्दैनन्।
उनको घाँ’टीमा अङ्ग्रेजी अक्षर ओ आकारको (O) धर्का पाइएको थियो। यस्तो कसैले कसैको घाँ’टी थि’च्दा मात्र हुन्छ। आत्मह’त्या गर्दा यस्तो आकार बस्दै बस्दैन। अर्को कुरा जब कसैले आफ्नो ज्या’न लिन्छ त्यतिबेला निजको आँखा वा जिब्रो बा’हिर नि’स्किन्छ। तर सुशान्त भैयाको यस्तो भएन। मसँग त्यसबेलाका यस्ता थुप्रै फोटोहरू छन्, जसले उनको ह’त्याको वकालत गर्छ। त्यसैले यो ह’त्या नै हो।
उनको ह’त्या उनकै कुकुर फजको बेल्टले घाँटी थि’चेर गरिएको हो। अब म खुसी छु किनभने यो केस सि’बिआइको हातमा छ। म चाहन्छु, चाँडै नै ह’त्यारा प’त्ता लागोस् र उसले फाँ’सीको स’जाय पाओस्। सुशान्तका पूर्व असिस्टेन्टको बयान वास्तवमै दु’खद छ। सि’बिआइको अन्तिम नतिजा हेर्न भने बाँकी नै छ।
Prevबो’ल्न न’सक्ने महि’लालाई ताने’र सा’मुहिक क’र’णी
Nextकोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै आज देखि मङ्सिर २२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय
काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबार राति १२ बजेदेखि निषेधाज्ञा